GERMANY KUCHIRIDZA MUGERMANY, MAGERMAN COURSES | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » German Times uye Mitsara » Mitsara muGermany, Iye zvino ari Mutongo muGermany
GERMAN PRIZE NENGUVA NEMAPARASI (PRASENS)
SQUARE PASVESI YEKUVA
Tinotenda kuti takagadzira sangano rakasimba mune zvidzidzo zvedu zvekare.
Iye zvino tava kutanga kutanga mitsara nekushandisa zvataidzidza kare uye tichadzidza zvakawanda.
SIMPLE SINGLE STRUCTURES MUGERMAN
Nenzira yakawanda, muchiGermany, nyaya yacho ndiyo nyaya yemutsara.
Pasi apa munoona muenzaniso unoshandiswa pamashoko akajeka.
Mold kuti ishandiswe:
CHIKAMU + FIELD + VANHU
Iye zvino kuti tinodzidza nzira yakashandiswa kushandiswa, tinogona kutanga kutora mutsara pakarepo.
Tichazotanga nemashizha emutauro akareruka kuitira kuti tinyatsonzwisiswe.
Sezvo zvidzidzo zvedu zvichifambira mberi, tichasangana nematongerwo akaoma akavakirwa.
Ngatitangei zvino tisa nhauri uye chiito chekutamisa mutsetse;
Musoro: ich: I
Our Verb: lernen: dzidza
Mutongo wedu: Musoro + Verb: ich lerne: Ndiri kudzidza
Mutsara wakaonekwa pamusoro apa uri mutongo wakajeka munguva ino.
Iwe unogona kuita mitsara yakasiyana-siyana uchishandisa chiito uye inoteerera.
Tichazonyora pasi mienzaniso mishomanana kuitira kuti tinyatsonzwisise ikozvino.
Musoro: du: sen
Verb: lernen: dzidza
Sentence: du lernst: uri kudzidza
Musoro: wir: isu
Sentence: wir lernen: tiri kudzidza
Zvino regai tikupe mienzaniso yemitsara yakavhenganiswa.
ini ndiri kumhanya
isu tiri kumhanya
iye ari kumhanya
iwe uri kumhanya
Nyaya yemutsara haifaniri kunge iine chimiro chemunhu oga.
Bata Ahmet zvakananga
Ahmet ari kumhanya
Bvunza Ayşe zvakananga
Ayse iri kutamba
das Kind of spricht
mwana ari kutaura
vana vari kutaura
vadzidzisi vari kutaura
iwe uri kunyora
iwe (unyoro) uri kugara
Tinofunga kuti izvi zvinonzwisisika.
Tinonyora pasi mimwe mitauro mishoma uye tapedzisa chidzidzo.
Iwe unogona kudzidza zviito zvakasiyana uye kugadzira mitsetse iri nyore munguva pfupi.
Mitsara yakasiyana-siyana yaunoita, inozobatsira zvikuru.
Ndiri kushambira: ich schwimme
Esra anoimba: Esra singt
Ndiri kuimba: ich singe
vanoreva nhema; sie lügen
Ndiri kureva nhema: ich lüge
Ndiri kuenda: ich gehe
Uri kuenda: du gehst
die Schüler fragen: vadzidzi vanokumbira
Ich esse: Ndiri kudya
die Frauen kuimba: vakadzi vari kuimba
der Arzt ruft: chiremba ari kudana
Ita bhinzi: maruva ari kukura
Tinovimba kuti mitsara iri pamusoro apa yakabatsira kusimudzira nyaya yacho.
Muchidzidzo chinotevera, tichava nemashoko mashoma achishandisa zvinhu zvakasiyana.
Kana iwe ukasununguka, tiri pano.
www.almancax.com - Zvose pamusoro peGerman nechiGerman!
KUFUNGA IZVI: German Articels Lectures, Mashoko eGermany
Nhanganyaya kuGerman - Basic German uye German Grammar Courses
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, 10. kirasi german present time, 9. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi german present time, muchi German prasens hurukuro, German present time lecture
22 May 2014, 19: 26
Zvakanaka chaizvo :)
04 April 2017, 19: 52